I-Tiger Technology ikhombisa ukugcinwa kokubambisana nokugeleza kokusebenza ku-IBC 2019 - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Tiger Technology ikhombisa isitoreji sokubambisana nokugeleza kokusebenza ku-IBC 2019
I-Tiger Technology ikhombisa isitoreji sokubambisana nokugeleza kokusebenza ku-IBC 2019
Ukukhonjiswa okusebenzayo kwe-AWS nokuhlanganiswa nabathuthukisi beqembu lesithathu kuzokwakha umnyombo wokuma kweTiger Technology ekuveleni ubuchwepheshe kulo nyaka
GA, USA, 11 Septhemba 2019 - Ubuchwepheshe beTiger, umholi ekugcinweni kwamafu nokuphathwa kwedatha yezimakethe zokusakaza nezokukhiqiza, uzosebenzisa i-IBC yalo nyaka ukukhombisa imikhiqizo yakhe ehambisa i-Amazon Web Services (AWS). Lezi zinhlelo zenzelwe ukusiza amakhasimende ukuthi athuthe okuqukethwe okugciniwe kwamafa asuka kumasistimu amadala we-system noma amafu we-hybrid, ngenhloso yokunciphisa izindleko zokugcina umlando nokwandisa ukufinyeleleka. Amasistimu we-Tiger ahlangana nezisombululo ze-Media-t-to-Cloud zokuxazulula ukuphatha ukufuduka, kanye ne-Spectra Logic ne-Qualstar yokugcina umlando kanye nezinhlelo zesipele. Kuzoba nemibukiso ye-Tiger Technology's ukuhamba nokusebenza kwamathuluzi okuphathwa kwedatha ahlanganiswe nokugcinwa kwefu le-ERA nezinhlelo zokudala okuqukethwe.
Inethiwekhi yozakwethu weTiger manje ifaka i-Nexsan, inkampani iStorCentric. UNexsan noTiger basayine isivumelwano somthengisi somhlaba wonke, ngaphansi kwalokho uNexsan uzohlinzeka ngeTiger Technology Collaborative Okuqukethwe Kwendalo kanye ne-Media Management yezinhlelo zokugcina zeNexsan. Inhlanganisela ye-Nexsan Hardware ne-Tiger software ihlinzeka ngengxenyekazi ephelele yokusebenza komsebenzi ephezulu, eseyatholakala ngenethiwekhi yokuthengisa ye-Nexsan yomhlaba wonke.
Izivakashi ezizokuma i-7.B58 kwa-IBC zizokwazi ukubona ukubukwa okubukhoma kokuthi iTiger Technology isebenzisa kanjani amandla e-AWS. Izinga leTiger Technology lizoxhunywa kubunikazi be-AWS eHholo 5, elizokhombisa ukusatshalaliswa kokuqukethwe kanye nokusetshenziswa kwamafu phakathi kweminye imisebenzi. Amafayili azobuyiselwa kusuka kuthayela esebenzisa ubuchwepheshe beMedia Translation Inc futhi akhonjwe isoftware ye-overcast HQ media media asethi, nakho konke okuhlanganiswe ngeTiger Bridge.
ITiger Bridge inika amandla ukuhanjiswa komsebenzi kwamafu asemqoka. Uhlobo lwakamuva lwenza ukubuyisa idatha ngokushesha okukhulu kunangaphambili sibonga isici esisha sokubuyisela. Lokhu kunika amandla abasebenzisi ukuthola isikhathi futhi basindise endaweni yokubeka ngokubuyisela inani elincane ledatha elidingekayo. I-Tiger Technology yakhele idumela layo ekwakheni isoftware nasekusebenzeni okukhulu, izinhlelo eziphephile zokulawula idatha zebhizinisi IT, ukubhekwa, izimakethe zezindaba nezokuzijabulisa. Eminyakeni edlule ye-15 imikhiqizo yayo iye yaqashelwa ngabasebenzisi abaholayo nabahlinzeki kule mikhakha njengethembekile, esebenza kahle futhi engabizi kakhulu.
ITiger Technology izophinde ibonise iSitolo seTiger sokulawula ukusebenza okuphezulu kokusebenzelana kwabasebenzisi abaningi; Izikhala ze-Tiger, zenzelwe ukuphathwa kwamaphrojekthi wabasebenzisi abaningi futhi Avid ukukhiya kwebhini; kanye nomphathi wesitoreji, i-Tiger Pool.
Phakathi kwezindawo eziphezulu ezisetshenziswa iTiger Technology yi-ENVY Post Production. "Sekuphele iminyaka eyisishiyagalombili sisebenzisa imikhiqizo yeTiger," kusho uJai Cave ongumqondisi wemisebenzi yezobuchwepheshe eUK. "I-ENVY isebenza ngokuzikhandla nangezindlela eziningi ezisebenza ngokushesha futhi nezinhlelo zikaTiger zinika amandla, ukuthembeka nokusekelwa esikudingayo."
ITiger Bridge nayo izokhonjiswa ihlanganiswe nesitoreji samafu se-Coeus kusuka ku-ERA onguchwepheshe wokuhamba komsebenzi wase-UK, osebenzisana neTiger Bridge ngesimo sayo sendawo, kanye namathuluzi wokudala wokuqukethwe weTiger. Ukuma wedwa noma kuhlanganiswe, iTiger Bridge inika abasebenzisi amandla okuba nedatha efanele endaweni efanele yezindleko ezifanele.
Yonke le mikhiqizo nemiboniso ingabonakala endaweni eyi-Tiger Technology, 7.B58, e-IBC e-Amsterdam RAI isuka ku-13 iye ku-17 Septhemba.
Mayelana neTiger Technology
ITiger Technology ibisungula isoftware futhi iqamba ukusebenza okuphezulu, okuphephile, nezixazululo zokulawulwa kwedatha yezinkampani ezise-Enterprise IT, Ukubhekwa, Imidiya kanye Nezokuzijabulisa, kanye nezimakethe ze-SMB / SME kusukela 2004. Ikhonjwe yi-Endeavor njengomunye wabahlinzeki bobuchwepheshe befu abaphambili emakethe namuhla.
Amakhasimende asebenzisa izixazululo ze-Tiger emazweni angaphezu kwe-120. Iphothifoliyo kaTiger's software iqukethe okwabelana ngejubane eliphezulu le-NAS / SAN, uhlelo lwevolumu ebonakalayo kanye nokuphathwa kwephrojekthi yokusebenzela yendawo ephezulu ngaphezu kwezixazululo ze-HSM tiering kanye nokuvumelanisa. I-Tiger Technology inika amandla ezinhlangano zobukhulu noma ngezinga ukuphatha izimpahla zawo zedijithali ezisesakhiweni, ifu lomphakathi, noma imodeli ye-hybrid.
Le nkampani ibanjelwe ngasese futhi isizakala ngethalente elingaphezu kwe-40 yobunjiniyela obusebenza embonini nabasebenza emkhakheni. Idlalwa eSofia, eBulgaria nase-Alpharetta, GA, USA.
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uvakashele: www.tiger-technology.com/
Mayelana ne-Amazon Web Services
Iminyaka ye-13, i-Amazon Web Services ibiyingxenyekazi yamafu ephelele futhi yamukelwe kabanzi emhlabeni. I-AWS inikezela ngezinsizakalo ezingaphezu kwe-165 ezifakiwe ngokugcwele ze-compute, isitoreji, imininingwane yolwazi, ukuxhumana kwenethiwekhi, ukuhlaziya, amarobhothi, ukufunda ngomshini kanye ne-intelligence yokufakelwa (AI), i-Intanethi Yezinto (IoT), iselula, ukuphepha, i-hybrid, okungokoqobo kanye nokungathandwa kwabathelisi esikubona (VR ne-AR) ), abezindaba, kanye nokuthuthukiswa kokusetshenziswa, ukuthunyelwa, kanye nokuphathwa okuvela kwiZindawo Zokutholakala ze-69 (AZs) ezingxenyeni zezindawo ze-22, kuthatha i-US, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong Special Administrative Region, India, Ireland, Japan, Korea, Middle East, Singapore, Sweden, kanye ne-UK. Izigidi zamakhasimende — kufaka phakathi iziqalo ezikhula ngokushesha kakhulu, amabhizinisi amakhulu, nezinhlangano ezihola phambili zikahulumeni — zithembela i-AWS amandla engqalasizinda yazo, iba namandla asezingeni eliphakeme nezindleko eziphansi.
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uvakashele: aws.amazon.com/
I-Nexsan is storage storage global storage storage storage storage storage storage storage storage storage storage storage storage storage storage customers customers i Nexsan leader leader leader storage storage ukugcinwa kwamabhizinisi emhlabeni jikelele, okunika amandla abathengi ukugcina ngokuphepha, bavikele futhi baphathe idatha yebhizinisi ebalulekile. Isungulwe e-1999, uNexsan uzakhela idumela eliqinile lokuthumela isitoreji esinokwethenjelwa futhi esingabizi kakhulu ngenkathi esalile ukuletha isitoreji esakhelwe inhloso. Ubuchwepheshe bayo obuhlukile nobunikazi obunikazi buvela, izidingo zamabhizinisi eziyinkimbinkimbi enephothifoliyo ephelele yesitoreji esinobumbano, isitoreji sebhulokhi, kanye nokugcinwa kungobo yomlando. I-Nexsan iguqula imboni yesitoreji ngokuguqula idatha ibe yinzuzo yebhizinisi ngokuphepha okungenakuqhathaniswa namazinga wokuhambisana nawo. Ilungele izinhlobonhlobo zamacala okusebenzisa ahlanganisa uHulumeni, Ezempilo, ezemfundo, ezeSayensi zokuPhila, iMidiya nokuzijabulisa, kanye nezikhungo Zezingcingo. I-Nexsan iyingxenye yomndeni weStorCentric wemikhiqizo futhi isebenza njengengxenye ehlukile ukuvikela ngokuphepha imininingwane yebhizinisi.
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uvakashele: www.nexsan.com/
I-Tel: + 44 (0) 7990 594555
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Isitoreji sefu Isitoreji Esisebenzisanayo Ukuphathwa kwedatha ISIVIVINYO Ukukhiqizwa Kwe-ERA Post ibc 2019 Ukuhlanganiswa Ukuphathwa kweMidiya IMedia Humusha Inc Nexsan Yeqile HQ ukukhiqizwa kokuthunyelwe Ama-Tiger BridgeAWS Isitolo sezilwane Ubuchwepheshe beTiger Umlingisi wevidiyo esingokoqobo virtual Isebenza kahle	2019-09-11
Ngaphambilini: Ingcweti Yokukhiqizwa Kwama-audiudiisual
Olandelayo: Amandla wePixel angeza Isoftware Echazwe Ngama-IP engakhanyisiwe ukuze kusungulwe i-PlayMaster Integrated Playout